Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း)
Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်းသည် နှာတာရှည် ခဏခဏပြန်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်ပြိး နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်။ အစောပိုင်းတွင် သင့်အရေပြားပေါ်ဝက်ခြံကဲ့သို့သောအဖုများပေါ်လာမည်။ ထိုအဖုများကပျံ့သွားပြီး ဝက်ခြံမပေါက်တတ်သောနေရာများတွင်ပင်ပေါ်လာသည်။
Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်းသည် ဝက်ခြံနှင့်မတူသောအချက်က အရေပြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြစ်အများဆုံးနေရာမှာ
ပေါင်ခြံကြား(လိင်အဂါီၤ စအိုဘေးနား နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေရာ)
နာခြင်း။ နက်နက်သို့ရောက်ပြီး ပြန်ကောင်းပြန်ဖြစ်နေခြင်း
လက္ခဏာများသည် မပြင်းထန်သည်မှ ပြင်းထန်သည်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ လူလူချင်းမတူ လူတူသော်လည်းဖြစ်သောအချိန်မတူ ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
စောစိးစွာသိပါက ကုသမှုပိုထိရောက်နိုင်သည်။ အောက်ပါအခြေအနေများရှိပါကဆရာဝန်နှင့်တွေ့ပါ။
လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာမတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကမသေချာသော်လည်း အချို့သူများက ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ အကယ်၍ ချွေးနှင့်အမှံုများက အပေါက်တွင်ပိတ်ဆို့နေပါက ဆံပင် အမွေးအိတ်သည် ယောင်လာပြီး ပေါက်ထွက်ကာရောဂါပိုးဝင်နိုင်သည်။ ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်းသည် ဆံပင်အမွေးအိတ်ကို တုံပြန်မှုများသော ခုခံအားစနစ်ရှိသူများတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာသည် အရွယ်ရောက်ချိန်တွင်စဖြစ်တတ်သည်။ အချို့သူများတွင် ၁၁ နှစ်မတိုင်မီကစဖြစ်တတ်သည်။ အသက်၁၁ မတိုင်မီစပေါ်ပါက ကလေးတွင်အရွယ်ရောက်ချိန်စောနိုင်သည်။ ရာသီသွေးဆုံးပြီး အသက် ၅၅ ကျော်မှဖြစ်ခြင်းကတော့ရှားသည်။
ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာသည် မျိုးရိုးလိုက်နိုင်သည်။ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သည်မိသားစုအတွင်းရှိသည်။
Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဝက်ခြံဖုများနှင့်ပြည့်နေသောအရေပြားကိုစမ်းသက်ခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ ထိုနေရာမှ နမူနာကိုဓါတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး ဖြစ်စေသောအကောင်ကိုရှာသည်။ ရောဂါသေချာစေသောစမ်းသက်သည့်နည်းလမ်းဟူ၍သက်သက်မရှိပါ။
Hidradenitis Suppurativa (ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေတတ်သည်။ သို့သော် တဖြည်းဖြည်းချင်းသက်သာသွားတတ်သည်။ ကုသမှုသည် ချက်ချင်းမပျောက်သွားစေသော်လည်း အထောက်အကူပြုသည်။ စောစီးစွာ ကြာရှည်စွာကုပါက နာခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ အနာကျက်ခြင်းကိုမြန်စေသည်။ အဖုအသစ်များပေါက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
ကုကမှုနည်းလမ်းများတော်တော်များများရှိပါသည်။ ကုထုံးများ၏ကောင်းသောအချက်မကောင်းအချက်ကို ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်ကိုတိုင်ဂရုစိုက်ခြင်း ဆေးဝါးသုံးခြင်းခွဲစိတ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
လိမ်ဆေးသောက်ဆေးများ။ ပဋ္ဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ ဗီတာမင်အေမှရသောဆေးများပါတတ်သည်။
ခွဲစိတ်ခြင်းကို ပြင်းထန်ပြီး အခြားကုထုံးများနှင့်မသက်သာသောအချိန်တွင်မှစဉ်းစားသည်။
ကုထုံးတိုင်းတွင် သူ့ဆိုးကျိုးရှိနိုင်သည်။ ဆေးစသောက်ပြီဆိုပါက ဆရာဝန်အားဖြစ်လာနိုင်သောဆိုးကျိုးများကိုကြိုမေးထားပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ချွေးဂလင်းများပြည်တည်နာကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အချို့မပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်သောကုထုံးဖြင့်သာကုသည်။ သို့သော် အခြားဆေးဝါးကုသမှုယူမည်ဆိုပါကလည်း ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ခြင်းကအရေးကြိးသေးသည်။ သက်တောင်သက်သာမဖြစ်ခြင်း အနာကျက်ခြင်းကြာစေသောကိစ္စများကိုအောက်ပါတို့ကိုအကြံပေးနိုင်သည်။
ပြည်တည်နာဖြစ်နေသောလူ၏အဓိက ရင်ဆိုင်မှုမှာ နာခြင်းရှက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ နာသောအနာများက သင့်အိပ်စက်ခြင်း လှုပ်ရှားခြင်း နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုများတွင်အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ ထိုအနာမှပြည်ထွက်ပါက ဂရုစိုက်သော်လည်းအနံများထွက်လာနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် စိတ်ပူပန်ခြင်း ကိုယ့်ကိုကိုဂရုစိုက်လွန်နေခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အခြားရောဂါရှိသူများ၏နားလည်မှု စိတ်ပူပန်မှုတို့ကိုနားလည်ထားပါ။ သင့်ဆရာဝန်အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသသူ ထောက်ပံ့မှုအဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတ် 12, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတ် 15, 2018
Hidradenitis suppurativa. https://www.aad.org/public/diseases/painful-skin-joints/hidradenitis-suppurativa. Accessed July 30, 2016.
Hidradenitis suppurativa. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hidradenitis-suppurativa/home/ovc-20200012. Accessed July 30, 2016.
Hidradenitis suppurativa. http://www.bad.org.uk/shared/get-file.ashx?id=88&itemtype=document. Accessed July 30, 2016.